Anoshanda Sei Apple Pfungwa? Nei ichikanganisa Android? Hatina kungwara zvishoma here? | Linux Vakapindwa muropa
Anoshanda sei Apple Pfungwa? Nei ichikanganisa Android? Hatina kungwara zvishoma here?
Isaac | | GNU/Linux, Linux vs. Windows
Zvakanaka, unogona kushamisika kuti chii chiri shure kwezita iri uye chii chinoita seichi chinoita pane webhusaiti nezve Linux uye yemahara software. Zvakanaka mhinduro iri nyore, Ini ndichaedza kutsanangura mashandiro anoita pfungwa dzevagadziri uye vagadziri vanoshanda kuApple uye nemabatiro avakaita chirongwa cheApple nehunhu, kuve vanokwanisa kuve vanokodzera mibairo yeGig Nobel yekupokana -mipiro kuvanhu. Asi kana iwe ukanditendera, ini ndichatanga nekutsanangura chimwe chinhu chinonakidza chakaburitswa mumazuva achangopfuura nezvekuti tekinoroji inobata sei kungwara kwedu.
Tekinoroji zvirokwazvo yakanakira vanhuKana zvisina kudaro, iyi blog uye zvimwe zvingave zvisina zvazvinoreva. Ini ndinoda hunyanzvi uye ini ndiri murevereri mukuru pazviri, asi kune imwe tekinoroji inogadzirwa, ndiregererei nezve chirevo, "benzi-chiratidzo" nekurerutsa kurangarira kweavo vanoishandisa. Ndichazvidzokorodza muchinyorwa chino, ini handirwisane nevanoishandisa, asi avo vanoigadzira. Iyo nyaya yekushandisika uye enzvimbo nharaunda yakanaka, asi kune imwe nhanho, nekuti kana ukaenda nyore, tekinoroji inogona kuita chombo kurwisa vanhu uye kurega kuve chishandiso chekuvabatsira.
Wakazvinzwa izvozvo Google yakanganisa kugona kwedu kubata nemusoro, sezvo isu tisingachafanirwe kurangarira zvinhu zvakawanda kudaro, isu tinongotsvaga ivo mune yakakurumbira yekutsvaga injini ... Uye zvimwe zvirwere zvakaonekwawo zvichibva mukushandisa kwatinoita tekinoroji. Zvakanaka, kusvika pandanga ndichienda, nharaunda nesoftware inopfuura usability uye nyore kushandisa, senge Apple's, zvinogona kunge zvichikanganisa kugona kwedu, vanotitadzisa kufunga uye kuomesa hupenyu hwedu, uye hongu, izvi zvinogona kusagadzikana, asi dzimwe nguva kuyedza kunopa muhombe.
Imwe nguva yapfuura ndakakwanisa kuverenga chinyorwa chakataura kuti vashandisi ve akasiyana masisitimu anoshanda akaongororwa kuti vaone unyanzvi hwako hwemakombiyuta uye kurongeka kwaive kwakadai: BSD uye imwe * nix, GNU / Linux, Windows uye Mac OS X. Hazvishamise kuti kurongeka kwezivo kunoenderana nehurongwa hwekuoma, kubva pakuomesesa kusvika pakureruka. Hazvirevi kuti vashandisi vanokwanisa vanoshandisa Unix uye avo vashoma vanoshandisa OS X (iyo inogona zvakare kunge iri nyaya), asi pamwe vekare * nix vashandisi (kwete kuverenga OS X) vaifanira kunetsekana nemashini avo.kuisa kana kugadzirisa komputa yako. , nepo iwo eOS X kana Windows nekungobaya bhatani uye kuita zvese zvaitwa ... Naizvozvo, vekutanga vanenge vadzidza zvakawanda kupfuura izvo zvakapihwa zviri nyore.
Munhu wese anoziva izvozvo kudzidzira nechimwe chinhu kunoita kuti iwe ufungisise iwo mafungiro nenzira yakadzika kwazvo uye zvachose kuti kana iwe ukaverenga, kuiona kana kuiteerera. Ndezvipi zvinhu zvakawanda zvawayeuka muchikoro zvaunorangarira uye zvinhu zvingani zvawadzidza zvaunoyeuka? Uye tichidzokera kuzita, Apple vagadziri vanoita anokwezva, anoshandisika uye akareruka dhizaini, ayo anogona dzimwe nguva kutombozvidza huchenjeri hwevashandisi vavo. Linus Torvalds atozvitaura: «Kana iwe uchifunga kuti vashandisi vako mapenzi, mapenzi chete ndiwo anozoishandisa«. Panguva ino, zvakanaka kuti kune tekinoroji yakapusa kune vakwegura kana vekunze vanoenda kune imwe nyika izvo zvinovabhadharira zvakawanda kuti vadzidze kupfuura zvizvarwa zvemadhijitari, asi, ini ndinoomerera, kusvika padanho.
Uye ikozvino tinoenda nemhedzisiro ye «Zvese zvinhu zvine hungwaru uye zvese zviri nyore, pasina kuyedza, pasina kufunga ...», chidzidzo chakaitwa nevadzidzi vanobva kumayunivhesiti ane mbiri senge Harvard, MIT, nezvimwewo, zvakaratidza kuti zvinopfuura makumi mashanu% (uye mune mamwe mayunivhesiti anodarika makumi masere muzana) evadzidzi havana kukwanisa kugadzirisa dambudziko riri nyore: «Bhora uye baseball bat inodhura mari inosvika madhora 50. Bheti rinodhura dhora kudarika bhora. Bhora rinoita marii? Mhinduro ndeyekuti bhora rinodhura $ 80, sezvo chiremwaremwa chaizodhura $ 1,10. Izvi zviri kunetsekana uye zvinoita sekunge tekinoroji iri kudzima kugona kwedu neimwe nzira, sekumwe kugona kwekare kwakaguma kuve mumunhu nekuda kweshanduko, tekinoroji, inova chikamu cheiyi shanduko, inoita kunge iri kuremadza kugona kwepfungwa. Tekinoroji inofunga isu!
Uye chii chine Android chine chekuita nezvese izvi? Zvakanaka, Mac OS X yakanyoreswa UNIX, asi pamwe UNIX, kana hazvo uzivi hwayo, yasara shoma. Musimboti weMac OS X iXNU, hybrid iyo yakasanganisa Mach 2.5 uye BSD 4.3 (kunyangwe yakazotsiviwa neFreeBSD kodhi). Mafirosofi aApple haana kuenderana neayo eaya masisitimu maererano nekushandisa. Ivo vakapiwa graphical interface uye zvishandiso maturusi zvakanyanyisa kupusa uye zvinokwezva zvekuti ivo vakanganwa hunhu uye zvakaipisisa, ivo vaparadza kugona kwavo mukutsvaga nyore kwekushandisa. FreeBSD ine simba, Mac OS X yakavezwa, yakasungwa pasi, inorambidzwa, ...
Zvinoitika ne Android chimwe chinhu chakafanana, kunyangwe ichivakirwa paLinux kernel, Android ingangove sisitimu yerudzi urwu inotambura zvakanyanya kubva kune malware uye nematambudziko ekuchengetedza, pamwe nekuve sisitimu isina mudzi isingachinjiki. Yakarasikirwa neicho chinhu cheLinux icho chainofanira kunakidzwa nacho, uye zvese zvinofarira kugadzira sisitimu ine kugona kukuru uye yakapusa kuitira kuti chero munhu ane chigunwe agone kumisikidza, kushandisa uye kuita chero icho chinokutendera iwe. Uye hazvishamise, kubvira Pfungwa yeAroid yakauya kubva mundangariro yemushandi weApple, sekujekesa kwaSteve Wozniak, uye nekudaro akaunza pfungwa iyi kuGoogle. Mhedzisiro yacho? Chigadzirwa chakabudirira senge Apple, asi ...
Ndapota, ndinoomerera, Vashandisi veApple havagumbuke. Uye izvi zvinogona kuendeswa ku Android sezvandinotaura uye kune mamwe masisitimu akadai seWindows kana kunyangwe kune mamwe mapurojekiti emahara. Izvo hazvisi zvekurwisa kana kudaidza vashandisi mapenzi, dambudziko riri kune vakagadzira varo, Apple (uye ivo vagadziri veApple mune ino kesi), kwete vashandisi vayo vanongova vanyajambwa….
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Linux vs. Windows » Anoshanda sei Apple Pfungwa? Nei ichikanganisa Android? Hatina kungwara zvishoma here?
Iwe unoisa iwo musoro senge chinhu cheanoshanda isisitimu imwechete uye kwete imwe. An OS chishandiso kana muyananisi kuti aite zvimwe zvinhu: nyora chinyorwa, kufamba, ita kubatazve mifananidzo, chirongwa, nezvimwe. Kana iwe ukarerutsa iro basa uye ukasariomesa, unoita rako basa. Dzimwe dzese ndedzemanyepo.
Ehe, OS haina basa neayo ega, iri "dura" pakati pemushandisi uye muchina uyo mamwe maapplication achashandira akasiyana mabasa ...
Asi iyo yekushandisa sisitimu inopa maturusi akadai seanosimudza (mhando Inotevera, Inotevera, Gamuchirai…) kana kumisikidza iyo-bhatani rimwe chete… Ini ndinofunga kuti akangwara ane zvishoma zvekutaura mune idzi kesi. Iyo ine desktop, GUI iyo zvakare inoita kuti zvinhu zvive nyore kwauri ...
Uye hazvisi zvevagadziri vanogadzira masisitimu akaomarara. Ehezve, kana ichikuchengetedza iwe uchishanda kana zviri nyore, zvirinani, asi kusvika padanho. Kana iwo muganho wapfuura, zvigadzirwa izvi zvinova kutuka Homo Sapiens Sapiens, asi zvinoita kunge masisitimu eAustralopithecus.
Uye haisi chete inoshanda kune maapps kana OS, asiwo kune mamwe magajeti uye zvishandiso zvatinoshandisa kazhinji.
Izvo hazvisi zvekufanirwa kuumbika kubva kunobva uye kuita zvese zvakanyanya kuomarara. Asi pakati peiyo uye Inotevera, Inotevera, Gamuchira… pane nzvimbo yepakati.
Ruben Cotera akadaro
Chokwadi chikuru, kana iwe ukadzidza chimwe chinhu ndipo paunorova sisitimu, zvinokupengesa, iwe unoedza izvi uye zvikasashanda, iwe edza imwe uye wozvityora zvakanyanya, nezvimwe. Ichokwadi kuti havazi vese vanogona kuve nyanzvi yeIT, asi kuitsenga kunongovaisa panjodzi nekuda kwekusaziva tekinoroji yavanoshandisa. Iwe haufanire kunge uri wekubira kukuru, asi zvirinani kuti uve nemafungiro ekutanga, sekunge iwe haufanire kunge uri makanika kana injinjini kuti utyaire mota, asi unofanirwa kuva nerezinesi ...
Pindura Rubén Cotera
Nharo yako haina kuenderana, iwe unotaura nezve kuchinjika kwemamwe masisitimu uchishandisa zvisingachinjiki nharo, kunyanya muzvinhu zviviri.
Rudzi rwevashandisi: Kubva pane yako maonero pane imwe chete yerudzi rwevashandisi, iyo inofanirwa kuve neruzivo rweiyo inoshanda system uye inofanirwa kunyatso shandisa nguva yavo pairi, iwe unogarei chaizvo?
Zvishandiso: Kune ruzhinji, iyo OS inzira uye kwete magumo, kuwedzera zvaunofarira uye ruzivo kuburikidza nezvisingaite generalizations kana zvichiratidza kumwe kusaziva, pikicha iyo inotaura nezveDiots inogona zvakare kushanda kune avo vanogara nemisana yavo chokwadi uye ivo vanotenda kuti "nyika yavo" ndiyo "nyika."
Tarisa, ndinoshanda munzvimbo yekutsvagisa iyo inoshanda masvomhu epamberi, epamberi zvakanyanya, munzvimbo dzakasiyana. Mangwana ini ndichafemera Bhosi wangu, Muzvinafundo ane makore makumi maviri ezviitiko, kuti aende kune linux system uye kuti arambe OSx.ve iDiot kune iReady. Ini ndinotenda zvechokwadi kuti iwe unogara mune yakafanana chokwadi.
Verenga chinyorwa zvakare. Hazvirevi kuti kana paine imwe mhando yemushandisi kana makumi maviri. Izvo ndezve kukupa iwe zvese zvakagadzirirwa-kugadzirwa kana nyore, nekukanya… sekunge iwe haugone kufunga. Kurerutsa hongu, benzi kwete.
Uye ikozvino ini ndinopfuudza iyo pfungwa yechinyorwa ichi kune nyika yedzidzo muSpain. Mune mamwe masisitimu edzidzo, akadai seaya eNordic, ivo vanodzidzisa vana kufunga, vanovapa maturusi uye vadzidzi ndivo vanoona sei uye nei zvinhu. MuSpain ivo havadzidzise maitiro ekufunga (kazhinji kune vadzidzisi vakanaka kwazvo futi), ivo vanongodzidzisa: izvi ndizvo, nguva, yeuka nemusoro uye ini ndichakubvunza iwe pabvunzo, uye ipapo ini ndichakudzikisa iwe kune munhuwo zvake kana izwi (kutadza, kunoshamisa,…) ????
Uye ikozvino ini ndinodzokera kukomputa nyaya, iwe unofunga kuti mumwe munhu anogona kudzidza zvakawanda nekuisa inoitisa Inotevera, Inotevera, Gamuchira ... pane mumwe munhu anozviita kubva kukodhi, kunyora, ... kana kubva kune bhanari, asi achiziva sei uye nei (panofanira kunge paine dzimwe nzira dziri nyore, ndazvitaura muchinyorwa, kune vanhu vakuru kana kuti zvinovatorera zvakawanda…) Zvakare, kanganwa izvi. Ini ndinokubvunza chimwe chinhu, iwe unofunga kuti nezvivakwa zvese, kutaura zvinehungwaru, izvo zvavanotipa izvozvi, hatisi kumira kushandisa imwe pfungwa yekugona? Ndezvekuti ivo vanototiudza paTV (chikoro, mamwe midhiya) ndiani akanaka uye ndiani akaipa, ndiani wekuvhotera uye ndiani asiri, mapfekero kana maitiro ekuita ... Kunyangwe izvi, kunze kwekubata ungwaru kana kufunga nyaya, kwaizoenderera mberi ipapo, kubata pane nyaya dzakadai serusununguko, hunhu uye hunhu.
Hungu AC akadaro
Zvakanaka, chekutanga pane zvese iwe unotaura nezve zvisirizvo uye nekuda kwekupokana ini handichakuudza chimwe chinhu kunze kwe: iwe wakanganisa.
Imwe, iwe unotanga nekukanganisa nyaya yacho, kuti zvinopfuura chokwadi chechokwadi chinyorwa chekufunga, chakavakirwa pachidzidzo. Zvakanaka, pano zvese zvakanaka, tinogona kukwidza kune ruzivo rwatino kupihwa nesainzi, senge muzana poindi. Asi imwe nyaya.
Mbiri, SO kana kwete, ichokwadi kuti tekinoroji inoita kuti tishaye basa mune ZVIMWE zvinhu, sekutaura kwemunyori werugwaro, achitaura nezvehunyanzvi hwemakomputa kana ruzivo. Izvo hazvichadiwe kuvhima caribou pabasa, kune misika. Ndokureva, hongu kuti kumberi kwaita kusava nebasa kune VANHU vazhinji mumunda wekuvhima kudya kwedu kwemanheru.
Tatu, ini ndinotora mazwi: 'Ndiregererewo nezve chirevo,' kupusa 'kudzikisira kugona kwevaya vanoishandisa. Ndichazvidzokorora muchinyorwa chino, handirwisane nevanoishandisa, asi nevaya vanozvigadzira. " Uye mimwe mimwe mienzaniso.
Muchidimbu, ndiani anofanira kutenda kuti chokwadi chaicho ndechako ndiwe.
Mikel garin akadaro
Chekutanga pane zvese ini ndinofanira kutaura kuti chinyorwa chako chakasimudza morali yangu 20 mapoinzi !!! Ini ndakakwanisa kugadzirisa dambudziko rebheti, ndinopika kuti ndisati ndaverenga mhinduro yako, ndichishandisa danho rangu remasvomhu rakawanikwa kuchikoro chesekondari!
B + P = $ 1,10
B> P = 1 -> B = P + 1
P + P 1 = 1,10 = >> P = 0,10 / 2 = >> P = 0,05
B + 0,05 = 1,10 = >> B = 1,05
B = $ 1,05> P = $ 0,05 mutsauko 1 $
Kana chiri chinyorwa, ini ndinofunga kuti zvinhu zvakasanganiswa izvo zvinofanirwa kuita asi nenzira yepamusoro. Ichokwadi kuti kana vakatipa zvese zvinoitwa vanoita kuti titadze kuverenga digital asi ndinotenda kuti dambudziko, kana rikakwanisa kutariswa rakadaro, nderekuti tsika iyi inokurudzira superspecialisation. Mune mamwe mazwi, ini ndiri mugadziri wemakomputa, zvakanaka ini ndinokudziridza uye ini hapana chandinoziva nezve zvemakanika. Unogadzirisa mota yangu ndobva ndakuisira maGüindown. Damn, ndanga ndatoita zvakapusa !!!
Makanika anoziva zvakawanda nezveinjini nematairi uye musayendisiti wemakomputa kubva kuBig Apple kana mawindow akajeka anoziva zvakawanda nezve kodhi uye zvinyorwa zvemapenzi ...
Zvichakadaro, murume murombo wekuzvarwa patsva uyo anowanzo * nix mushandisi anofanira kutsiva uye kusungira iyo capacitor yakaputika mundiro yake, tarisa mafuta ari mumotokari yake sezvo isingasvike kumakanika, isa maGuindown munharaunda @ maciz @ nechiso, tsvaga kuti nei script inouya mune yazvino distro natively isingaendi neyekupedzisira chizvarwa chemifananidzo kadhi (rangarira kuti irombo) ... Zvisinei, kiramba iri kuenda.
Kwaziso nekutenda nekugadzira zuva rangu!
Pindura Mikel Garin
Kana iwe uchinyatsofunga kuti nekunyora chirongwa uye usingashandisi wizard pakuisirwa kwayo unenge wakangwara, iwe uri benzi uye unofanirwa kupfuura mac ...
Iwe haufanire kugadzira, ndoda kudzikisira vanogadzira chero chikuva. Imwe yega ine zvayakanakira nezvayakaipira uye, zvine rombo rakanaka, zviripo kune zvese zvido. Tarisa pane kutaura nezveuyo waunonyanya kufarira (linux) nekuti pese paunotaura chimwe chinhu nezvekuti mac iri nyore kana kuti Windows haina kuchengeteka zvinondiita kuti ndide kumira kukuverenga.
Kunyanya kuomesa ndapota.
Verenga zvakataurwa, ini handifunge kuumbiridza chirongwa ndiyo mhinduro, asi pane nzvimbo yepakati. Inotevera, Inotevera, OK menyu haina kana kukupa sarudzo. Chinhu chekutanga kugamuchira rezinesi hongu kana hongu, nekuti kana ukasazvigamuchira, hazvichakubvumidza iwe kuti uise. Zvino zvinokuratidza chidzitiro uye Chinotevera, ndeipi imwe sarudzo iwe yaunayo kunze kwekuenderera kana iwe uchida kuisa?,… Uye hazvisi nekuda kwesoftware chete, ndiri kutaura nezve tekinoroji mune zvese.
Chinokosha ndechekuti OS inoitirwa ruzhinji rwevanhu, vanoziva kuverenga komputa. Vazhinji vanoshandisa zvishandiso semidziyo vasingade kuongorora mashandiro ayo. Iwe unogona kuve mutyairi wendege uye usingazive mavakirwo e ndege.
Ini handibvumirani, iwe unongofunga, wakatsauka, kubva pane yako maonero, huya, hausi iwe woga rudzi ruri pachiso chenyika. Ini ndiri wekufunga kuti, kazhinji, nei gehena ndichifanira kuziva chero chinhu pamusoro pemakomputa? Ini ndinoshandisa * nix se "OS chete", handina Win kana Apple, iyo yandingade, izvo zvinowanzoita kuti ndide kukanganwa kuti ndiri pamberi pePC uye ndinotarisa pabasa. Pasina Win neApple software yacho yaizonyanya.
Muenzaniso wakapusa, chii chingave hofisi otomatiki dai pasina Redmon Hofisi? Chokwadi nerd angave anodada nekugadzirisa zvinyorwa kubva kumagumo avo, asi havazi vese munhu ane nerd, akaenzana uye agamuchire.
Pindura kuna juanjp2012
Mhoroi, mese makatora kubva pakuona kwekomputa, hazvisi izvo. Ini handina basa nehunyanzvi hwemakomputa, hazvisi zvehunyanzvi hwemakomputa. Zvichida ini ndanga ndisingakwanise kutaura ndoga nenzira kwayo. Izvo hazvisi zvekuziva kana, ndinogona kuziva zvakawanda nezve zvemagetsi uye handina zano rekuyedza ndege kana aeronautics. Mumwe nemumwe anodzidza nekudzidza zvaanoda uye kwete tese tinofanira kuziva zvese, nguva yevakachenjera yapera. Icho chiri nezve chimwe chinhu chakasiyana zvakanyanya, chiri chekutora kubvisa kwako kugona kwepfungwa kana kufunga. Dzimwe nguva ivo vanoda kuita kuti zvese zvive nyore kwazvo kana kuti zvatoitwa, izvo zvinokanganisa kugona kweavo vanozvishandisa.
Izvo hazvisi zvekuita zvinhu zvakaoma, kana nezve hunyanzvi hwemakomputa. Ini ndapa mimwe mienzaniso, asi ndiri kutaura nezve tekinoroji zvakajairika uye kukanganisa kuri kuita kune vashandisi mune dzimwe nguva nekuti iri nyore kwazvo.
Pamusoro pezvo, pasina Apple neMicrosoft software yacho yaisazove yepakati, iye zvino uyo anofunga nenzira yakasarura ndiwe. Kune makuru mapurojekiti anodarika Microsoft neApple. Uye iwo amunoti maNerds anogona kunge asina kunyanyisa. Kana ivo vachida kugadzirisa zvinyorwa kubva kune iyo terminal kuti vadaro, hapana anovadzivirira, kana ini ndinodzivirira kushandisa Apple software neiyi pfungwa. Uye pasina Hofisi, yandakanyora zvinyorwa zvinoverengeka ndichiziva kuti zvakanaka sei, sezvo paizove neCalligra Suite, LibreOffice, OpenOffice, uye mamwe akawanda mamwe maoffice automation mapurojekiti. Beyond Office kune hupenyu ...
Iwe unozoshamisika kuziva kuti pamberi peHofisi paive paine mameseji edhita senge WordStar kana WordPerfect, maspredishiti akaita saLotus 123 kana Mano, mamaneja edhatabhesi senge dBase III. Uye kwaive nemahofisi suites senge Open Access II. Ehe!. Microsoft haina kugadzira hofisi otomatiki. Paitove neakawanda software kare.
sabala tincho akadaro
Kupesana nezvinotaurwa nechinyorwa chino, ndinotenda kuti mazuva ese isu takangwara sezvo maturusi edu (mune ino kesi, iwo emakomputa) akareruka uye "kupusa-humbowo" zvekuti vanhu vane nguva yakawanda yekuita zvavanofanira kuita (the agronomist, the architect, the biologist, the geneticist and others) uye pane zvavanonyatsogona uye vasingagadzirise nyaya dzisinei navo. Semumwe munhu akatonyora mune imwe komenda, rimwe zuva vanhu vakafunga kurima kwezvipfuyo nekutengesa macheni uye sezvo tanga tisingachafanirwe kupedza maawa akawanda tichivhima chikafu chedu, takapedza maawa iwayo tichigadzira, tichivandudza nekugadzira uye ndosaka tiri patiri. . Mukupedzisa, ini ndinosarudza kuti chiremba maminetsi gumi nemashanu padhuze nekuwana mushonga unorwisa chirwere uye kwete maminetsi gumi neshanu padhuze nekuziva kuti software yaanochengeta matanda ake inogadzirwa sei neruoko uye nekuiswa.
Pindura tincho sabala
Ngatione Isaac, usagare nemienzaniso, ini ndinongofunga kuti wanga wakanganisa munzira yaunotora, uchitaura kuti yakapusa sisitimu inoita kuti usanyanya kunetseka mupfungwa. Zvichida dai iwe usina kuisa imwe sisitimu munzvimbo, isu tingadai takanzwisisa kuti zvinhu zviri nyore zvinotigadzirira, zvishoma zvataizojaira kuyedza.
Nharo inonakidza. Ehezve kurerutswa kwechishandiso hakuiti kuti vashandisi vayo vawedzere kana kushoma njere, kunyangwe izvo zvine hungwaru zviri kuzviita nyore Nekudaro, zvinoita kunge zvine basa kwandiri kushaikwa kwekuda kuziva nezve chishandiso, mune ino kesi, iyo inoshanda sisitimu. Ini handina hukama necomputer yenyika, asi izvo hazvireve kuti ini ndaizvifarira zvirinani kusvikira ndaita gnu-linux yangu chete OS. Uye ini ndinoramba ndichidzidza, asi ndisina kuwandisa: iri shure kwezvose chishandiso, asi chakakosha muhupenyu hwedu hwezuva nezuva.
Kuverenga chinyorwa kanenge katatu nekuti ndaisanzwisisa zvaida kutaurwa nemunyori, uye ndakaverenga zvirevo kuti ndione nzira uye zvinobudirira imwe neimwe ichidudzirwa nenzira yavo.
Iyo poindi maererano neni ndeyekuti tekinoroji inoita kuti isu mbeveve? kana kuti vanogadzira kana makambani ari muindasitiri yeIT vane mhosva yekuvaita mapenzi kuita zvese zviri nyore, zvakanaka, asi ndeipi pfungwa yekugadzira tekinoroji kana isiri yekurerutsa zvinhu. Uye iwo muenzaniso wekuti izvozvi hatichadzorereki nhamba dzenhare, zvirinani ndisati ndashandisa smartphone, ndakainyora pasi pabepa kana kuchengeta kadhi kuitira kuti ndisakanganwa nhamba, izvozvi tinozvichengeta pafoni imwechete kana pamusoro pegore zvichienderana nebasa rakashandiswa.
Tekinoroji haiite chero munhu benzi, kana ivo vanogadzira havafaniri kupomera, ko kana paine mashandisiro akanaka kana akaipa, munhu asina ruzivo rwemakomputa kana rimwe bazi rakasiyana, kwavari tekinoroji, sezvavanotaura mumashoko apfuura, chete nzira, chimwezve chishandiso, nguva, kana chishandiso ichi chichirerutsa chimwe chinhu chainetsa kwazvo, pasina mubvunzo uchachishandisa uye kutora mukana wenguva yako yemahara yezvimwe zvinhu. Chii chaunosarudza kushandisa chirongwa chekuverenga chinotarisira bhizinesi rako accounting? Kana ita zvese izvo neruoko uye kupedza maawa iwe aunogona kushandisa pane zvimwe zvinhu? Kana kuita zvakanyanya kunyanyisa, ivo vanhu vaishandisa Ubuntu uye vakaisa iwo mapurogiramu avanoda kuti vawane mafungu egiravhiti akafanotaurwa naAlbert Einstein.Vane hupenzi here nekushandisa tekinoroji yakarerutsa zvinhu uye yakanangana nekuedza kune zvimwe zvinhu zvataurwa kudzidza?
Pfungwa yechinyorwa chako inonzwika seinonakidza, asi kana iwe uchida kutsanangura zvinhu zvirinani uye nekupa mienzaniso inokanganisa zvakanyanya vanhu, uye kwete kuisa izvo izvozvi kuti hatichabatise manhamba efoni.
Ini ndiri mushandisi weLinux uye ndakagadzirisa dambudziko zvisizvo.
Yese i $ 1.10 uye bhora rakadzikira dhora rimwe chete.
Ndakafunga kuti chiremwaremwa chaikosha dhora rimwe uye bhora gumi masendi.
Nei mhinduro iyi isinga shande?
Nei zviri chaizvo 1.05 uye 0.05?
Pindura kune leoramirez59
Mhoroi, haigone kuve $ 1 bheti uye $ 10 bhora. Iyi ndiyo yaive mhinduro yakapararira pakati peavo vakaongororwa. Asi hazvina kunaka nekuti kana zvichikosha izvo, chiremwaremwa chaikosha 90cent (1-0.10 = 0.90) kupfuura bhora kwete $ 1. Mhinduro chete ndeyekufunga kuti chiremwaremwa chinodhura kanosvika $ 1 uye isu tasara ne0.10 kuti kana ukavagovanisa zvakaenzana (0.10 / 2 = 0.05) unogona kutofunga kuti chiremwaremwa chakakosha $ 1.05 uye bhora iri $ 0.05 ( ikozvino, 1.05 -0.05 = $ 1, kana ichikosha $ 1 kupfuura bhora).
App yega yega ine chinangwa "chero chikuva" mushandisi wekupedzisira anoda nyore kushandisa uye dhizaini dhizaini. Kuti iyo app irinyore kushandisa, inoyevedza uye inonzwisisika, haina chero hukama, zvakati wandei inosarudza, iyo nhanho kana kufambira mberi kwehungwaru kwemumwe nemumwe mushandisi, nekuti munhu wega wega akazvipira kune yakatarwa nzvimbo yeruzivo, ndokuti, semuenzaniso: a Chiremba kana asingakwanise kana kutora nguva nemaapplication akaomarara, izvo zvaari kuda, izvo zvaanoda kubva kuapp, ndeyekuti inovhara zvimwe zvinodiwa nekureruka kukuru kwekushandisa kunogoneka. Izvi zvinoreva here kuti wakangwara kupfuura chiremba anovhiya? Nenharo yako isu tinoshandisa iyo DOS inoshanda sisitimu zvakare kuti tiwane njere kana zvirinani izvozvi, kuti chiremba anovhiya agadzire yake OS nekushandisa.
Zvisinei, ini handisi kuzoongorora chinyorwa chako, ini ndinongogumisa kuti iwe waedza kugadzira chinyorwa chemakakatanwa uye izvo zvawakaita rugwaro rwekutsanangura ruzere nekusaenderana.
Ngatione… Muchikamu chipi chechinyorwa icho chinotaura nezve kungwara kushandisa software yakaoma. Hakuna kupi uko kune kutaura kwekuwana ungwaru. Munhu ane IQ yemakumi masere anounganidza haazove nezana uye IQ 80 haisi kuzova muganhu wekushandisa Mac.
Zvandiri kuyedza kutaura, uye zvinoita sekunge iwe haudi kunzwisisa ... ndeyekuti tekinoroji yakanyanya kupusa (ingave software, chishandiso kana chero chinhu), inogona kutiita nenjere dzehungwaru.
Asi kana iwe uchida kuramba uchiona izvo zvisiri muchinyorwa, enda mberi.
Zvichida kutsanangurwa kwepfungwa huru yechinyorwa hakusi kubudirira, nekuti zvinovhiringidza. Asi hongu, neimwe nzira, iyo yakajairika pfungwa yekuti kureruka kunogona kutitungamira kuti tisafunge haizi yechokwadi chete, asi zvakare inoonekwa. Wepakati mushandisi ave ajaira kusafunga, uye kana chimwe chinhu chisingashande "mukati mezviri nyore", iye haakwanise kugadzirisa dambudziko rake. Uye ini handisi kutaura izvi, asi ini ndakavakirwa pane zvakaitika kwandiri semusayendisiti wemakomputa muyunivhesiti yeyunivhesiti, ine huwandu hukuru hwevashandisi: 5000 (vadzidzi, manejimendi ...).
Dambudziko harisi kunyanya kureruka uku, asi zano shure kwaro: kutsamira. Uye kubva pane uku kutsamira kunomuka (zviri pamutemo) bhenefiti yemakambani anogadzira software. Zviripachena, kana mushandisi akachengetedza nguva pane mamwe mabasa, ivo vanozokwanisa kuishandisa kune vamwe vandaiona seakakosha (semuenzaniso, grafiki dhizaini). Asi, kana isu tikachinjisa iwoyu pfungwa imwechete, semuenzaniso, kuenda kutyaira, tinoona kuti kana tikasaenda kuchikoro chekutyaira tikatora rezinesi rekutyaira, zvinozotiomera kuti tityaire mota "zvakajairika" uye zvakachengeteka mamiriro. Hongu, muenzaniso wacho wakawedzeredzwa, asi unoratidza pfungwa yacho zvakanaka.
Ndakaverenga, ndikashamisika, kuti anenge munhu wese anotsvaga kune yakamenywa "mantra" yekunyora kodhi, nezvimwe ..., nekuti kubva pane yangu maonero ekuzvininipisa, handifunge kuti zano reruzhinji rinoenda ipapo, kunyangwe kana paine chero kutaurwa muchinyorwa.
Ini handisi kushinga kutsanangura kuti ndeipi kambani inoshanda zvakanyanya mune iyi tambo yekureruka / kutsamira, nekuti ini ndinofunga kuti ingangoita yese inonyatso kuyedza kuunza iyi pfungwa kune yayo budiriro.
Kune rimwe divi, ini ndinoshamiswa ne "baseness" yemamwe mashoko apfuura. Pfungwa inopesana inogona kutaurwa zvine mutsigo. Ini ndinofunga kuti kana mumwe munhu akarasikirwa nehunhu hwavo, imhaka yekuti ivo vanogadzirisa dambudziko mavari neimwe nzira. Ndapota, zorora.
Ruisu cordova akadaro
Pano hatitaure nezve yakatarwa sisitimu yekushandisa, vazhinji vakazvidudzira nenzira iyoyo, izvo chavasiri kutaura nezvazvo zviri nyore, izvi zvinoshanda kune zvese zvese kwete chete pakombuta, semuenzaniso vanhu vakagara vachidya chikafu chinokurumidza saMaruchan pakati pevamwe kana zvasvika pakatarisana nekicheni zvinovabhadharira zvakawanda (izvi zvatoitika muvanhu vadiki vazhinji) pane zvakare nyaya yekuti kana pasina chikafu chakareruka kugadzirira ini handidye, nekuti zvakafanana necomputer sainzi iri kusvika padanho uko hongu Hazvisi nyore zvachose kuita, vanhu havasi kufarira, rimwe zuva ini ndanga ndichitarisa bhaisikopo revhosi uye chakandishamisa mazhinji acho ndechekuti yaive yakaipa bhaisikopo nekuti yainonoka uye zviitiko zvekuita hazvina kuoneka maminetsi mashanu ese, kuve ivo vanhu vakajairwa imwe mhando yemufirimu uye vasingakwanise kutsungirira chimwe chinhu chakasiyana vari mutsika yakanyanya kushandiswa kuve munzvimbo yekunyaradza. Chimwe chakakanganisika ndechekuti iwe unogona kuisa chero chinhu mu software uye mushandisi haatombo funga nezvayo uye ini ndaona akawanda kesi dze malware, phishing uye zvimwe zvinhu zvekuti paunotanga kuona iwe unoona kuti manyepo asi vanhu semuenzaniso vanodonha facebook link in webhusaiti ine url yekunyepa asi ine yakafanana interface, yakafanana nemushonga pane mishonga inobatsira uye mimwe isingabatsire vamwe isingabatsire kune chimwe chirwere, zvisinei vanhu vakaisa mavari kuti yakanaka uye vanozvitora vasina kana kutarisa kuti vari kumedza zvakafanana nezvikafu zvemaindasitiri zvine zvakawanda zvekuti munhu haugone kufungidzira, zvakafanana nesoftware uye spyware mikova yekumashure uye kuwanda kwezvinhu.
Pindura Ruisu Cordova
Chidzidzo chakaburitsa kuti chinhu chimwe chinoita kuti tive vakangwara shanduko nematambudziko.
Mamwe makonzo akagadzirwa kuti atevedzere iwo maze zuva nezuva uye mamwe aine labyrinth yakachinja zvishoma zuva nezuva, huropi hwemakonzo echipiri hwakanga hwakabatana zvakanyanya kune mumwe (brain plasticity) uye hwakanga hwakakura mune dzimwe nzvimbo dzekuronga. chisarudzo.
Android ndeye crap, mashoma anovandudza, yakawanda bloatware, mudzi unodiwa, google muranda. Hapasisina androis ndiri kuenda ku iphone kana windows foni.
hehe shamwari ... ndinoenda kumberi, ndinoenda kune yekare LG a275.
Chikonzero, ndakaneta nemapaneli akachenjera.
Pindura kune leoramirez59l
Iwe murume, nekuti iwe unotenga chishandiso kubva kumhando senge Samsung, inoizadza ne bloatware, ikozvino funga kuti une sarudzo yekuchinja rom mu android zviri nyore uye isa iyo vhezheni ye android yaunoda, yakatenderedzwa uye yakagadziridzwa. Uye muranda weGoogle, ndinofunga idiki, haufunge? Windows muranda weMicrosoft uye Ios muranda weApple (kunyanya Apple zvishongedzo zvinoenda nenzira refu mumutengo) uye pane zvekuvandudzwa ndinofunga kuti nhamba haina basa kana zvisiri izvo zvigadziriso uye optimizations zvavanoita
Pindura kuna azeriak
Ini handisi kuzovhura gakava nezve izvo zvakanaka kana zvakaipa, asi chokwadi, ichi chinyorwa chinogumira pakutuka kune UX Dhizaini. Steve Krug kana Donald Norman ndinofunga vaizofunga seni. Chinyorwa ichi, ndisingade kutuka kure nazvo, chakandiita kuti ndinzwe se "nerd aftertaste" yakarongedzwa nekamwe technophobia yekutora chidzidzo icho chavanoita nyore masvomhu bvunzo iyo vanhu vanokundikana, hapana chakanangana zvakananga nekushandisa kana mamiriro eimwe OS.
Ini ndinofunga kuti kana Windows neApple zviripo nhasi imhaka yekuti HAPANA kugoverwa kweLinux kwakadzidza kuti havazi vese vane ruzivo rwemakomputa uye vanhu havadi, uye havazoshandisa zvinyorwa kana zvinyorwa. Ini ndinofungidzira kuti, kuva pano, humbowo hwekuti ini ndinoshandisa Linux, kunyangwe ini ndinoshandisawo Mac (seanogadzira iOS) uye Windows (yezororo). Kunze kwekuronga, Linux haina kusimba, hachisi chinhu chaunofarira, icho chinhu chaunogadzirisa.
Sekutaura kwawakaita iwe paunoisa kuongorora kwecomputer ruzivo, iyo yakaoma kunzwisisa, iyo yakawanda COMPUTER ruzivo (kusimbisa zvishoma zvishoma). Munoidaidza kuti kukunda uye ini ndinoidaidza kuti kukundwa. Mushandisi haafanire kuve nehunyanzvi hwemakomputa kuti aite komputa yake chishandiso chinobatsira. Achave neruzivo rwechinhu chake icho, pamwe, chinotonyanya kuomarara kupfuura kuziva mashandisiro echidimbu chemidziyo. Zvakare kutaura nezveLinus Torvalds yechimwe chinhu chisiri chekombuta chete inoratidzika kwandiri kunge chikanganiso chakakura. Izvo zvaunondiudza kuti iOS inogoneswa ndinozvigamuchira pasina kupokana, kuti iwe undiudze kuti Macintosh inogoneswa ndinozviramba ...
Ndiri kukupa fananidzo iyo yandinoziva kuti ichave yehunhu hunorwadza asi ndinofunga iwe uchanzwisisa hwaro hwepasi pezvese zvandinoda kuratidza:
Iwe unofunga kuti nekushandisa maoko ako iwe unofunga zvishoma? Iwe unofunga waizove wakangwara here kana iwe uchifanira kufungisisa nokungwarira pamusoro pechimwe nechimwe kufamba kune chikamu chemuviri chaunoda kuti chiende uye neicho musimba? Iwe ungashanda nespeed imwechete?
Musiyano unofanirwa kuitwa pakati pezvishandiso nevashandisi. Iye anouraya - huropi uye, kunze kwekufananidza, mushandisi - haafanire kuziva chero chinhu pamusoro pekuti maturusi ake anoshanda sei - maoko uye, kunze kwemufananidzo, komputa - iye anongofanirwa kuzvishandisa nechinangwa. Izvo hazviite iwe benzi nekuti iwe haungotambise nguva pane chimwe chinhu chinganzi chisina basa.
Ndokumbirawo usatore chirevo changu zvakanyanyisa kana kunyanyisa.
Mhoro. Ini ndinotora chikamu chepositi yako chandisingagone kubvumirana nacho.
«Ini ndinofunga kuti kana Windows neApple zviripo nhasi, imhaka yekuti HAPANA kugoverwa kweLinux kwakadzidza kuti havazi vese vane hunyanzvi hwemakomputa uye vanhu havadi, uye havasi kuzoshandisa zvinyorwa kana zvinyorwa. Ini ndinofungidzira kuti, kuva pano, humbowo hwekuti ini ndinoshandisa Linux, kunyangwe ini ndinoshandisawo Mac (seanogadzira iOS) uye Windows (yezororo). Kunze kwepurogiramu, Linux haina kusimba, hachisi chinhu chaunofarira, chinhu chaunogadzirisa. "
Kunze kwekusave nemusoro kana muswe, zvishoma zvandinganzwisise nezve iyi ndima hazvisi izvo.Zvikonzero nei Apple neWindows zviripo hazvina chekuita neLinux, kunze kwekuti ivo vanogovana chikamu chikuru chekodhi uye tekinoroji hwaro. Zvimwe zvine hunyanzvi hunyanzvi hwekushandisa zvehurongwa, nguva. Chimwe chinhu uzivi hwekusika, kugovera, kuve muridzi uye mashandisiro ayo ari pasi pemhando dzakasiyana dzerezinesi idzo mumwe nemumwe anadzo.
Kana iniwo handibvumire kuti kugovera (ivo vanogadzira) kunofanirwa kudzidza chero chinhu nezve vashandisi, kunze kwekunge yakanangana nerumwe rudzi rwemushandisi. Mazhinji aripo eGNU / linux-based distributions ndee generalists uye ane anopfuura anodarika mwero wekusimudzira weavhareji mushandisi. Chimwe chinhu isoftware yese inowanikwa, yakajairika kune vese, iyo muzviitiko zvakawanda yakanangana nekugoverwa chaiko asi kugadzira gadziriso dzakakodzera dzinogona kushanda zvakakwana mune vamwe. Ikoko ndinogona kukupa chimwe chikonzero chekuti mushandisi anomanikidzwa kuve nehunyanzvi hwemakomputa izvo muzviitiko zvakawanda havafanirwe kushandisa software iyoyo.
Chekupedzisira, ini handizive zvaunoreva kana iwe uchishandisa iro izwi risinganake. Izwi iro, sekuziva kwangu, rinoshandiswa kukodzera chivakwa chivakwa, semuenzaniso muzvikafu.
Kana ndotaura nezveWindows neApple, ini handisi kutaura nezvavo padanho rehunyanzvi, kana nezvehunhu hwakanaka kana hwakaipa hweumwe neumwe. Zvandiri kureva ndezvekuti Linux parizvino haina kugadzira makwikwi chaiwo seOS, chimwe chinhu icho dai chaive chaitwa padhuze nekujairirwa kune akajairika mushandisi, ingadai yakaisa kumanikidza kwakawanda kune makuru acho.
Kugoverana kwekuzviremekedza kunofanirwa kudzidza icho chinangwa chainoda kunanga. Kugovaniswa kwakawanda hakufanirwe kufunga nezverudzii mushandisi achashandisa software yayo, asi izvi zvinosiya vanhu vazhinji munzira.
Kana ndati Linux haina maturo, ndiri kureva chivakwa chivakwa, hongu. Kufanana nezvikafu zvisina kana chinwiwa uye zvisingakupe kugutsikana, Linux haigadzi kugutsikana kana uchiishandisa, kunyangwe kukosha kwayo kuri kusahadzika zvachose.
Mukupfupisa uye pakupera kwezuva: Kuva nekuvhura terminal muLinux (chimwe chinhu chiri chingwa chedu chezuva nezuva) kunoita kuti vanhu varege kuchishandisa nekuti haina kujeka. Kuti vanhu havashandise zvinoreva kuti hazviunze kufarira kana kukwikwidza izvo, mumaonero angu, kukundwa kunodzivirirwa zvachose.
Unowira mukukanganisa kana uchitaura kuti mushambadzi wekuzviita nyore, anozvidza mushandisi, izvo zvaanoita kushanda nesimba kuitira kuti mushandisi wekupedzisira we software agone kushanda pasina matambudziko, tenga software uye uishandise uye usina mapepa akawanda . Iyoyo mota, unoitenga kuti umutse uye usafunge nezve chimwe nechimwe chezvinhu zvacho mukushanda kwayo zvinobvumidza kufamba.
Zvingave zvakanaka kuti munhu wese adzidziswe sainzi yemakomputa kuitira kuti isu tese tigone kugadzira OS yedu uye software uye kushandisa vamwe vatinoziva kuti zvinoshanda sei uye nemabatirwo azvo yakanaka iyo isu tese tinoziva kudyara, tinoziva nezvemutemo nemitemo uye nezvehupfumi.
Chero bedzi iyo software ichibatsira uye iri nyore kushandisa, ichave ichibudirira uye ndizvo zvatiri kuda nekutenga, hatitenge tedium kana kushomeka kwekugadzira (ndizvo zvazviri mututube), kumhanyisa mhanyisa uye kuita zviri nani zvinotengwa , uye ndipo panogadzira mugadziri panofanirwa kuombera, nekuti vanhu vazhinji uye vasingagoni kuverenga nekunyora maererano nesainzi remakomputa vanogona kupinda munyika ino inoshamisa.
Nyasha ari kuona kushandiswa kweruzivo. Izvo zvinobatsira kuziva maitiro ekuumbiridza software uye kuziva mashandiro uye mamwe mahebhu anoshanda, apo izvo zvinoita munyori kunyora mabhuku uye kuvhura yake yemavara edhita uye kungonyora chete? Wakaita basa rakaipa here iro programmer uyo anokupa iwe chete sarudzo yeOK mukuisa, inotevera, isa password, rutsigiro, ndatenda? Handifunge kuti ibasa rakakura zvachose. Dai zvaive zvakanyanya kuoma, vazhinji vaizoisa parutivi maturusi aya voshandisa tapureta.
Iko kukura kwehunhu kunoenderana nezvinhu zvinenge zviviri. Imwe ndeyekuti tinoda kuti basa rese rive nyore, kana zvisina kudaro paizove pasina maturusi. Vaviri mapheki echikafu kumakeke ako, izvo zvakakosha kumudzidzi uyo anoda kuve wekugadzirira gadzira, ziva maitiro ekunyora software inomubvumidza iye kugadzirisa mameseji kana kutaura neshamwari dzake.
Imwe yacho, ini ndichakupa zano rehupenyu, kana uchiverenga maonero ako ini ndinogona kungoti iwe uri weboka diki kwazvo mukati mevashoma nevashoma vanofarira tekinoroji munzvimbo yekuvandudza software uye kugadzirisa. Vazhinji vacho havana kana hanya nazvo, havafunge nezve SO, vanofunga nezve zvigadzirwa zvemidziyo, vanotsvaga kugadzirwa uye nguva yekunwa uye kuita bonde, ivo havafarire mune idzi misoro.
Ndiri kuvafarira zvakadaro, ndinozvitora semunhu asingagoni kuverenga nekunyora, asi ndinofarira kuverenga nekuswedera padyo, zvisinei, zvinofanirwa kuzivikanwa kuti vanhu vazhinji havafarire zvinhu izvi, vanongotsvaga kuve vanobudirira vasina hutachiona uye kuda mapikicha kungave pa facebook ne instagram, hapana chimwezve. Chinzvimbo chako chinzvimbo chidiki.
Uye nekuda kwehuwandu hwakawanda uhu husina kufarira (dai vaifarira, vaizodzidza) kuziva nzira yekuunganidza, kugadzirisa graphical matambudziko emamiriro ekunze, kushandisa iyo terminal nevamwe, ndeyekuti ivo vanogadzira vanotsvaga kufambisa zvese uye zveangu kwazvo, munhu wese anofara uye anobudirira.
Iwe unogara uchifanira kuve une chinzvimbo, asi munhu wese ane chinzvimbo mune izvo zvavanofarira kune yega yega, komputa sainzi ndiyo imwezve nzvimbo yehupenyu uye zvirokwazvo yakatonyanya kukosha pane vamwe.
Kana iri dambudziko remasvomhu, iro vanhu havazive kuti vangarigadzirise sei chaizvo nekuti iri dambudziko nemusungo xD zvakajeka kana usingaite equation iwe unowanzo taura 1 uye imwe yacho 0,1 maererano neicho kukosha uye masvomhu inokupa zvakanaka, zvisinei kuti imwe mhedzisiro ne equation ichave iri chaiyo (chete ichokwadi)
Kana iri Android, inotambudzwa nemarware uye chengetedzo? zvirokwazvo, kana iri yakakura kwazvo, kwete kunge linux. Chinhu chisinganzwisisike ndechekuti mashoma sei anozivikanwa matambudziko eIOS ekuchengetedza ndeyekuti mashoma ekurwiswa nemarara zvinosvika kwaari nekurumbira kukuru.
Jorge Irala akadaro
Chaizvoizvo iwo ese akarurama; izvo zvaida kunzwisiswa nemunyori kuomesa kuisirwa, kushandiswa kwetemu nezvimwe. Inoita kuti munhu ashandise musoro zvishoma uye pfungwa ndiyo mashandiro ehuropi hwemunhu. Iyo yakaoma kwazvo asi panguva imwechete yakapusa kumushandisi; hehe ini ndakafarira muenzaniso webheti iyo inokwikwidza zvakanyanya kana uchishandisa uropi uye masvomhu mafomula iwe unowana imwe mhedzisiro inoita senge isina musoro. Saka munhu wese akarurama, tekinoroji inotipindira, kusvika padanho remuviri wedu kunge zvipfeko. Ndiri kutaura nezveInternet yezvinhu, pamwe nesainzi yekunyepedzera ivo vanozove neakawanda kutonga, zvinoitika ndezvekuti isu hatizvizive nekuti isu tichine simba rekutonga asi kusvika padanho reizvo shamwari dzinofanirwa kuita nharo!
Pindura Jorge Irala
Ndokumbirawo ... zvine basa rei izvi. Hupenyu hwevanhu vazhinji hautenderedze masisitimu anoshanda, chokwadi ndechekuti kana zviri nyore kuishandisa zvinoita kuti hupenyu hwangu hushome uye ndinoshandisa nguva iyoyo kurarama ... pakupedzisira munhu wese anoshandisa tekinoroji sechishandiso kurerutsa mashandiro. zvinhu zvakatoipisisa, ngatifungei ipapo nezvekuchinja vhiri rekwere nekuda kwekuti vhiri rakareruka maitiro
Ndakatenga komputa yangu yekutanga ... ndanga ndisingatozive kuti rakaomeswa dhisiki, rakauya nemahwindo akaisirwa uye nemagigabytes gumi nemaviri edhisiki rakaoma (hauzomboizadza ivo vakandiudza) pavhiki ndakaritakura, ndakadzikisa icho kuchitoro chandakabhadhara mukomana akanyora fomati c: uye ndikapika kuti ndisabhadhara zvakare, nekudaro ndakadzidza kuishandisa, kuiputsa nekuigadzirisa, gore rakapfuura ndakauya kuzo debian, pakutanga kumbotya, asi mazuvano zviri nyore kuwana chero ruzivo (saiti senge iyi semuenzaniso). Ini handina kubata mac muhupenyu hwangu, handikwanise kutaura, asi ndinofungidzira kuti ndaingoda kuziva kuti ndaive nemahwindo, uye kuti ikozvino ndine mweya wangu debian, (bye Microsoft) zvaizove neavo ve apuro.
Muchidimbu, anoshanda masisitimu haakuite iwe unowedzera kana kushoma ungwaru, kana zvakanyanya kana zvishoma nehusimbe, izvo (uye iwo chete maonero angu) iwe unongosarudza uye sarudza. Ndinofungidzira kuti pakupedzisira zvichave kuti sezvo ndisiri muvakidzani anopisa uye ndinongova magirazi ane mhanza, handina kumbowana chero munhu aida kugadzirisa komputa yangu--
Pindura kuna ishehemphemp
Linux-yakavakirwa pamba otomatiki masystem
Linux ichiri iyo yakachengeteka kwazvo OS?